ईनासमा प्रियंका र स्वस्तीमाको भिडन्त ! - Gufgaf : Nepal ko entertainment web site : Nepali cinema & Gossip : Nepali comedy : Video & jokes : celebrity interview : Nepali art ,music , manoranjan & more
ईनासमा प्रियंका र स्वस्तीमाको भिडन्त !
काठमाण्डौ असोज २४ ✎ सिनेमा ‘छक्का पञ्जा २’मा आमा छोरीको भूमिका निर्वाह गरेका अभिनेत्रीद्धय प्रियंका कार्की र स्वस्तीमा खड्का ईनास अवार्डको मनोनयनमा परेका छन् । ‘छक्का पञ्जा २’ मा स्वस्तीमाको आमा बनेकी प्रियंका ‘छक्का पञ्जा’बाट उत्कृष्ट अभिनेत्रीको रुपमा नोमिनिज भएकी छिन् भने स्वस्तीमा खड्का सिनेमा ‘लभ लभ लभ’ बाट । उत्कृष्ट अभिनेत्रीमा श्रृजना सुब्बा पनि मनोनित भएकी छिन् । यी तीन मध्ये यो वर्षको उत्कृष्ट अभिनेत्री को हुनेछ त्यो भने असोज २७ गते नै थाहा हुनेछ ।
उता उत्कृष्ट अभिनेतामा दीपक राज गिरी, दयाहाङ राई र विपिन कार्की भिड्दैछन् ।
गत वर्ष सिक्किममा आयोजना भएको यो अवार्ड विवादमा पनि आएको थियो । यस पटक भने ईनास अवार्ड नेपालमै सम्पन्न गरिँदैछ । यस अवार्डमा विभिन्न २० विधामा अवार्ड प्रदान गरिँदैछ । अन्तरा ईन्टरनेशनलले व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको यस अवार्डमा लाईफटाईम अचिभमेन्ट अवार्ड र सक्रिय चलचित्र पत्रकारिता अवार्ड पनि प्रदान गरिने भएको छ ।
यस अवार्डका विधा र ती विधामा मनोनित भएकाहरुको नामावली यस प्रकार छ ।
१ – उत्कृष्ट फिल्म
२ –उत्कृष्ट निर्देशक
विर विक्रमः मिलन चाम्स
३ – उत्कृष्ट नायक
४ – उत्कृष्ट नायिका
५ – उत्कृष्ट सह– अभिनेत्री
६ –उत्कृष्ट सह–अभिनेता
७ –नव– निर्देशक
८ –उत्कृष्ट नव–नायक
९ – उत्कृष्ट नव– नायिका
१० –उत्कृष्ट खलपात्र
११ – उत्कृष्ट हाँस्य कलाकार
१२ – उत्कृष्ट लेखक–पटकथा
१३ –उत्कृष्ट सम्पादक
१४ – उत्कृष्ट छायांकार
१५ – उत्कृष्ट संगीतकार
अर्जुन पोखरेलः भन्छु आज९म यस्तो गीत गाउँछु०
राजनराज सिवाकोटीः पूर्व पश्चिम रेल९छक्का पन्जा०
कालिप्रसाद बाँस्कोटाः निर जहिले रिसाउने९पुरानो डुङ्गा०
१६ – उत्कृष्ट गीतकार
१७ –उत्कृष्ट गायक
१८ – उत्कृष्ट गायिका
१९ – उत्कृष्ट नृत्य निर्देशक
२० –उत्कृष्ट द्धन्द्ध निर्देशक
काठमाण्डौ मंसिर ०१ ■ … ‘छक्का पञ्जा २’ले बिहिबार प्रदर्शनको ५१ दिन मनाएको छ । असोज ११ गते फूलपातीको अवसर पारेर प्रदर्शनमा आएको यो..
कुसुमे रुमाल’ देखि ‘छक्का पञ्जा २’सम्म यी हुन् ५१ दिन मनाउने सिनेमा
छक्का पञ्जा २ अपार : प्रदर्शन लगातार : के छ ५१ औँ दिने तयारी ?
‘छक्का पञ्जा २’ तेस्रो हप्तामा, ‘छक्का पञ्जा’को रेकर्ड तोड्न ३ करोड बाँकी